Edhisheni timu yeThermorecetas - Vanobika neThermomix | ThermoRecipes
Thermorecetas ndiyo inotungamira blog nezve mabikirwo akagadzirwa neThermomix muSpain uye chimwe chezvakakosha padanho rekicheni kazhinji. Iyo yemusangano wezuva nezuva wevadi vese vekubika zvakajairika uye kunyanya kune avo vese vanoshandisa iyo Thermomix.
Webhu yakatanga muna 2010 Uye kubvira ipapo mazuva ese isu tinoburitsa imwe (kana dzinoverengeka) zvekutanga mabikirwo kuitira kuti munhu wese agadzire mumakicheni avo. Tine mabikirwo emarudzi ese, ezvese zvido uye zvakagadziridzwa kumatanho ese, kubva kugadziriro dzakaomarara kusvika kune dzakareruka dzinogona kuitwa mukati memaminitsi makumi matatu uye neruzivo rwekubika.
Uyewo takaparura mabhuku akati wandei sezvaungaona muchikamu chino. Panguva ino yatinayo Mabhuku maviri akaburitswa naAnaya izvo zviri kutengesa chaizvo uye isu takaburitsawo akati wandei mabhuku mumadhijitari fomati senge bhuku ra Taura mapepa kuti uite mumaminitsi mashoma makumi matatu. Isu takabatanawo ne NGO kugadzira bhuku rekubatana kubatsira kupa chikafu kune avo vanonyanya kuda.
Kana iwe uchida kuona ese mabikirwo, ikozvino unogona kuzviita nekupinda chikamu che zvikuru-akarayira mapepa kana mu Mapapiro akarairwa nedingindira. Iwe unogona zvakare kuona mimwe misoro yenyaya yatinobata nayo pawebhu nekuda kwayo chikamu chedu chikamu.
Ese mapepa ayo anoonekwa muThermorecetas zvakagadzirwa nevabiki vedu. Iwo mweya wewebsite ino uye vanoratidza kugona kwavo uye neruzivo sevabiki mune yega yega madhishi avanogadzira. Muchikamu chino Isu tinokuzivisa iwe kuboka redu rese revanyori kuti iwe ugone kuzviziva uye iwe unonzwa pane ino webhusaiti kumba. Zvakare, kana iwe uchida kujoina nesu ikozvino unogona kupedzisa fomu iri uye kana tangoita isu tinosangana newe nekukurumidza sezvazvinogona.
Zita rangu ndinonzi Irene, ndakazvarwa muMadrid uye ndine degree reDudziro nekududzira (kunyangwe nhasi ndiri kushanda munyika yekubatana kwepasi rose). Parizvino, ini ndiri murongi weThermorecetas.com, bhurogu yandanga ndichishandira pamwe kwemakore akati wandei (kunyangwe ini ndaive muteveri akavimbika kare kare). Pano ini ndawana inoshamisa nzvimbo iyo yakandibvumidza ini kusangana nevanhu vakakura uye kudzidza zviuru zvemakereke uye manomano. Shungu dzangu dzekubika dzinobva pandakanga ndiri mudiki pandakabatsira amai vangu kubika. Mumba mangu, ndiro dzakabva kumativi ese epasi dzakagara dzakagadzirirwa, uye izvi, pamwe nerudo rukuru rwekufamba kwekunze uye zvese zvine chekuita nenyika yekubika, zvaita nhasi chimwe chezvinhu zvangu zvikuru zvekuzvivaraidza nazvo. Muchokwadi, ini ndakatanga munyika yekublogi makore mashoma apfuura neyangu yekubika blog Sabor Impression (www.saborimpresion.blogspot.com). Gare gare ndakasangana neThermomix, uye ini ndaiziva kuti yaizova shamwari yangu huru mukicheni. Nhasi handigone kufungidzira ndichibika ndisina izvozvo.
Zita rangu ndinonzi Ascen uye ini ndine degree reKushambadzira uye Ruzhinji Hukama. Ndinoda kubika, kutora mifananidzo uye kunakidzwa nevana vangu vana. Muna Zvita 2011 ini nemhuri yangu takatamira kuParma (Italy). Pano ini ndinoramba ndichigadzira madhishi eSpanish asi ini ndinogadzirirawo zvakajairwa chikafu kubva munyika ino, kunyanya kubva mudunhu reParma - maParmesan anozvirumbidza nekuve "chikafu mupata" uye gastronomic bere reItari ... -. Ini ndichaedza kuendesa iyi tsika yekugadzirira kwauri, hongu, nguva dzose neThermomix yedu kana neBimby, sekutaura kwevaItari.
Ndakatanga neangu hobvu yekuda kubheka kubva pazera re16, uye kubvira ipapo handina kumira kuverenga, kutsvagisa uye kudzidza. Zvaive zvakaoma kwandiri kuzvipira zvizere kwazviri uye kutsvagirwa chaiko kuve neThermomix mukicheni mangu. Zvinonyanya kugadzikana kugadzira chikafu chaicho uye zvinowedzera ruzivo rwangu nezvekubika, zvinondinetsa uye kugona kuenderera ndichidzidzisa mapapiro akareruka uye ekugadzira.
Ini ndakazvarwa muAsturias muna 1976. Ndakaita zvidzidzo zveTechnical Business uye zveVashanyi muCoruña uye izvozvi ndinoshanda semushamarari anofarira ruzivo mudunhu reValencia. Ndiri zvishoma mugari wenyika uye ndinotakura mapikicha, zviyeuchidzo uye mabikirwo kubva pano neapo musutukezi yangu. Ndiri wemhuri mune iyo nguva huru, yakanaka neyakaipa, inopetenuka patafura, saka kubvira ndichiri mudiki kicheni yanga iripo muhupenyu hwangu. Asi pasina kupokana shungu dzangu dzakawedzera nekusvika kweThermomix kumba kwangu. Zvino kwakauya kugadzirwa kweblog blog La Cuchara Caprichosa (http://www.lacucharacaprichosa.com). Ndirwo rumwe rudo rwangu rukuru kunyangwe ndine zvishoma zvarakasiiwa. Ini parizvino ndiri muchikwata chinoshamisa paThermorecetas, mandinoshanda semupepeti. Ndezvipi zvimwe zvandingade kana kushuvira kwangu kuri chikamu chebasa rangu uye kudana kwangu kwekuda kwangu?
Ndinoda kubika. Uye nyora. Saka chii chiri nani pane yekubika blog? Thermorecetas inosanganisa basa rangu uye neshungu dzangu. Ndokusaka ndichigovana nemi mabikirwo angu akanakisa, akagadzirwa nemidziyo inodiwa, uye zvakare nechido chekuita kuti muvafarire.
Zita rangu ndinonzi Silvia Benito uye pamwe naElena ndakatanga iyi blog muna 2010. Kubika uye kunyanya Thermomix ndiko kufarira kwangu kukuru uye kunoratidza. Ndanga ndichikura zvishoma nezvishoma, ndichidzidza nenzira yekuzvidzidzisa; hunyanzvi hwangu madhiri .... yum yum yum.
Ini ndinonzi Elena uye chimwe chandinofarira chiri kubika, asi kunyanya kubika. Kubva zvandakave neThermomix, chishuwo ichi chakura uye uyu muchina unoshamisa wave chinhu chakakosha mukicheni mangu.
BASED PAGirazi! Makore akati apfuura ndakatanga kufarira nyika yegastronomic uye nemagadzirirwo ayo mukicheni yega yega. Ini, uyo akangovhura midziyo kuisa mu microwave ichiita hwaro hwechikafu changu. Kutenda kune inozivikanwa blogger, ini ndakatanga kushandisa kicheni kune zvinopfuura kungovhura firiji uye kubata chero chinhu. Mushure memakore mashoma ndichiita ndega, kunze kwekushandisa pamba apo neapo, ndakawana robhoti rinozivikanwa rekicheni randinogadzira akawanda emarepeti andinopa pachiteshi uye mashandisiro awo anondishamisa mazuva ese. Zvikuru zvekuti handidi kurega kuigovana. MAUYA! Kunyangwe ndichifarira kubika kazhinji, kwevamwe makore ndakaita shanduko mukudya kwangu nekuda kwekutanga kwemararamiro akavakirwa pamitambo uye kugwinya. Mazhinji eeresipi andinogadzira anoenderana nefilosofi yekudya izvo zvatinonyatsoda zvichibva pamatanho edu nezvatinoda, tichigovera zvinowedzerwa nezvigadzirwa zvisina hutano sezvinoita dzimwe hombe zvigadzirwa dzinotitengesa. Izvi ndezvekugadzirisa mapapiro nekumisikidza zvimwe zvinoshandiswa kune vamwe zvinofamba zvirinani (shuga yezvinonaka zvinotapira zvakasikwa senge stevia kana tsanga dzese pane dzakanatswa). Zvishoma nezvishoma uchazviona.
Cook weshungu uye basa. Kubva pandakatanga kushandisa iyo Thermomix makore mazhinji apfuura isu tanga tisingapatsanurike mukicheni ... uye kwemakore mazhinji anouya! MuThermorecetas ndinoburitsa mapepa angu akanakisa kubatsira vanhu vese vari kutanga mukicheni kuti vawane zvakanakisa kubva kune yega yega. Tinoverenga here?